ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: Virus များနှင့် တိုက်ခိုက်ခြင်း
ကိုမျိုးချစ်က သူ့ဘလော့ဂ်မှာ ဒီလို သတိပေးတဲ့ပို့စ် တင်ထားတယ်။
ဘလော့ဂါ မိတ်ဆွေများသို့ အထူးသတိပေးခြင်း
ဒီနေ့ email ဖွင့်ဖွင့်ခြင်း ရောက်နေတဲ့ စာတွေထဲက မိတ်ဆွေဘလော့ဂါတွေ ရဲ့ လောလောဆယ် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ Virus တွေအကြောင်း တစ်ခုနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ကျွန်တော် နားလည်တဲ့ ကာကွယ်နည်းလေးတစ်ခု ဖြန့်ဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ သူတို့ရဲ့ စာတွေကိုလဲ နဂိုအတိုင်းဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘလော့ဂါ မိတ်ဆွေ အပေါင်းကို သတိပေးအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်နေသူကို ဆန့်ကျင် ရေးသားနေသူတွေ အထူးသတိထားကြပါ။
ကျနော့် ဘလော့ဂ်မှာ Kalar ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ လူတယောက် see here or here လို့ရေးပြီးတော့ လင့်ခ်တွေ ပေးပါတယ်။ ကလစ်လိုက်တော့ စက်ကို ခြိမ်းခြောက်တိုက်ခိုက်မယ့် ဗိုင်းရပ်စ်တွေ လွှတ်ထားတဲ့ လင့်ခ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျနော်က ကွန်ပြူတာ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ရင် သိပ်နားမလည်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ ပေးတဲ့ လင့်ကို ကလစ်လိုက်တော့ မေးခွန်းတခု ပေါ်လာတယ်။ စကရင်က ဖြူသွားတယ်။ အိုကေ ကလစ်ရင် ဘာဖြစ်မယ် မသိပါဘူး။ မင်းစက်ကို ဗိုင်းရပ်စ်တွေ တိုက်ခိုက်နေပြီလို့ သတိပေးစာတန်းပေါ်ပါတယ်။ cancel ကလစ်လိုက်ပေမယ့်လဲ စက်ထဲကနေ တချို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကို ဝင်လို့ မရပါဘူး။
ကျနော် အရင်က ဝယ်ထားတဲ့ stop'n sign in ဆိုတဲ့ ပရိုဂရမ်တခုနဲ့ စက်ကို fix ပြန်လုပ်လိုက်မှ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ ကျနော့်ထက် ပိုမို တတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေအနေနဲ့ အဲဒီလို လင့်ခ်နဲ့ မိမိဘလော့ဂ်ကို လာရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရင် သတိထားနိုင်ဖို့နဲ့ စက်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် အကောင်းဆုံး ဘယ်လို လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ ပို့စ်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် တင်ပေးကြဖို့ ပန်ကြားအပ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော့် ဘလော့မှာလည်း အဲဒါကို လူတစ်ယောက်လာ ထားသွားပါတယ်။ အဲဒါကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့
သူပေးတဲ့ link ပေါ် mouse တင်ထားပြီး Browser ရဲ့ ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာ အဲဒီ link က ဘယ်ဆိုဒ်က
link လဲဆိုတာကို မြင်ရပါတယ်။ ကိုယ်မသိတဲ့ ဆိုဒ်၊ မသေချာတဲ့ ဆိုဒ်ဆိုရင် လုံးဝ click မလုပ်ပဲ၊ admin ကို
အကြောင်းကြားစေလိုပါတယ်။ အဲဒီ comment အောက်မှာလည်း သတိပေး comment တစ်ခုကို ရေးထားပြီး
အခြားလူတွေကို အဲဒီ comment မဖြတ်ခင် သတိပေးစေလိုပါတယ်။
နောက် တစ်ချက်က ဆိုဒ် admin က ပေးတာ မဟုတ်ဘဲ အခြား လူတွေ ပေးတဲ့ ဆိုဒ်တွေဆို နိုင်ငံရေးနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့
ကိုယ်သွားနေကြ ဆိုဒ်တွေကလွဲရင် အခြားဆိုဒ်တွေကို မသွားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ခင်ဗျာ။
သူတို့က နာမည်ပေါင်းစုံသုံးပြီး လုပ်နေတာပါ။ ကျမဆီမှာလည်း ဝင်လုပ်တာ လေးငါးကြိမ်မကတော့ပါဘူး။ ကျမက အဲဒီကော်မင့်ကို ဖျက်ပြီး အဲဒီအောက်မှာ သတိပေးစာလည်း ရေးလိုက်ပါတယ်။ ခုဆိုတော်တော်များများ သိနေပြီထင်ပါတယ်။ တခုထပ်သတိထားရမှာက နောက်ပုံစံတမျိုးနဲ့ လုပ်လာမှာကိုပါ။ သိတာနဲ့ ပို့စ်တင်တာတို့ အကြောင်းကြားတာတို့ လုပ်ကြပါဦး
မျိုးချစ် ၏ အကြံပေးချက်
တကယ်တော့ ကျွန်တော်လဲအဲဒါကို မိတ်ဆွေတို့ဆီကို ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ မရေးဖြစ်တာပါ (အပျင်းကြီးနေတာပါ) နောက်ပြီးကျွန်တော့်ဆီဘဲလာနေတယ် အောက်မေ့လို့ပါ ဒီကိစ္စက ကျွန်တော်တို့ကိုသာ တိုက်ခိုက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး စာဖတ်သူတွေထဲက Comment ကိုဖတ်ချင်တဲ့သူတွေကိုပါ တိုက်ခိုက်ထားတာပါ ဒီ Virus ကိုရေးနေတဲ့ကောင်တွေကိုလဲ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတွေ လိုက်နေပါပြီ ဒါကိုအလွယ်ဆုံးကာကွယ်လို့ရတဲ့ နည်းတစ်ခု ရှိပြီးသားပါ
မိတ်ဆွေတို့ Blogger Account ထဲမှာ Settings ကိုသွားပါ ပြီးရင် Comments Tab ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
Who Can Comments ထဲမှာ Users with Google Accounts ကိုရွေးပါ
အောက်က Enable comment moderation? မှာ Yes ဆိုတာကိုရွေးလိုက်ပါ
ပြီးတော့ အောက်ဆုံးက Comment Notification Email မှာ ကိုယ့် email ကိုရေးထားပြီး Save Settings ကိုရွေးလိုက်ပါ
ဒါဆိုရင် Comments တွေ Blog မှာမတက်ခင် မိတ်ဆွေတို့ email ထဲကနေ Notify လာပြီး အရင် Review လုပ်ခွင့်ရပါမယ်
ပြီးမှ စိတ်ချရပြီဆိုမှ Publish Comments လုပ်လိုက်ယုံပါဘဲ အလွယ်ပြောရရင် Comment ကို ဆင်ဆာဖြတ်ပြီးမှ တင်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာ
ဒီကစပြီး လင့်တွေပါတဲ့ Comments တွေမှန်သမျှ ဖွင့်မကြည့်ဘဲ ဖျက်ပြစ်လိုက်
စိတ်ချရတဲ့ Comment ဆိုမှ Publish လုပ်လိုက် ဒီတော့ Comment ဖတ်သူတွေပါ အန္တရာယ် ကင်းတာပေါ့ဗျာ
ဘလော့ဂါ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ ဘေးရန်ကင်းပြီး ပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွာ အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ရရှိကြမယ်ဆိုကျွန်တော် ကျေနပ်ပါပြီ
ကျွန်မရဲ့ ပို့စ်တွေမှာလည်း အလားတူ ကွန်မန့်တွေ လာထားထားပါတယ်။ ပထမတခါတော့ ကျွန်မ အလုပ်က ကွန်ုပြူတာကနေ ဖွင့်ကြည့်မိတာဖြစ်လို့ ကျွန်မ အိမ်က သုံးနေကျ LapTop မှာတော့ ဘာမှ မထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ အလုပ်က စက်ကနေ ဖွင့်မိတော့ ဗိုင်းရပ်စ် alarm တွေပေါ်လာပြီး ချက်ချင်း စကန်လုပ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း သဘောပေါက်လိုက်ပြီး အဲလို ကွန်မန့်တွေ တက်လာတဲ့အခါ ချက်ချင်း ဖျက်ဖျက်ပစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှတော့ မပြောပြမိဘူး။ ခု ကိုမျိုးချစ်ဆီက အီးမေးလ်ကို ရမှ တော်တော်များများ ဘလော့တွေမှာလည်း ဒီလို ကွန်မန့်တွေကို လက်ခံရရှိတယ်ဆိုတာကို သိရပါတော့တယ်။ ကွန်မန့်များကို ဖျက်လိုက်ပြီဖြစ်သော်လည်း နမူနာ အနေနဲ့ ကျွန်မ အီးမေးလ်ကနေတဆင့် ကော်ပီပြလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ ဗိုင်းရပ်စ် နှောင့်ယှက်ခံရခြင်းဘေးမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။
သူတို့ ပေးထားသော Link တွေကို click မကြည့်ကြဖို့ အထူး သတိပေးပါတယ်။
အားလုံး သိရုံသက်သက် ကော်ပီပြထားတာပါ။
မတ်လ ၁ ရက်နေ့က ချသွားတဲ့ (ခုချိန်ထိတော့) နောက်ဆုံး ကွန်မန့်ဖြစ်ပါတယ်။
Malashicage has leftanew comment on your post "ပြန်ပေးဆွဲခံထားရတဲ့ ဒုက္ခသည် စခန်းကြီးတစ်ခု":
Remove all viruses, spyware and adware!
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်နေ့က ကွန်မန့်ဖြစ်ပါတယ်။
Nemuro has leftanew comment on your post "မိဘနှင့် သားသမီး":
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ရက်နေ့က ကွန်မန့်ပါ။
Tojagal has leftanew comment on your post "မိဘနှင့် သားသမီး":
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်က ကွန်မန့်။
Ivan has leftanew comment on your post "မိဘနှင့် သားသမီး":
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်က ကွန်မန့်။
Ivan has leftanew comment on your post "KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖဒိုမန်းရှာလားဖန်း လုပ်ကြံ...":
ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံးရရှိတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့က ကွန်မန့် ဖြစ်ပါတယ်။
Malabei has leftanew comment on your post "ဘာလဲဟဲ့ Valentine's Day":
ရေးပြီးချိန်: 3/09/2008 10:45:00 PM